Cuno, Qalabka lagu cuno
Qalabka lagu cuno
Cups, Weelasha, Taarikada, fijaan
iyo malqacad dhuuqo
Gloves & Yimid New
Qiimaha Our waxaa waajib ah in isbedel la xiriira cayriin kharashka wax iyo arrimo kale oo suuqa. Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha updated ka dib markii shirkadda aad nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah
Haa, waxaan u baahan tahay si kasta Maalqabeendda ugu yaraan $ 1000, iyo tirada shay kasta ilaa 100,000pcs.
DABCAN. Waxaan leenahay R xoog & D kooxda, wax soo saarka waxay noqon kartaa caadadiisu-dhigay, si loo waafajiyo shuruudaha adiga kuu gaar ah.
Waa kuwee shirkadaha waa weyn ee macaamiisha / ugu weyn aad ee dalkeenna / regiorr?
Waxaan leenahay macaamiil badan oo arrin dunida oo dhan, laakiin ma muujin karaan wax badan oo ku saabsan macluumaadka qarsoodiga ah.
Waayo-baarka, markii hogaanka ku saabsan tahay 7 maalmood. Waayo, wax soo saarka mass, markii hogaanka waa 20-30 maalmood ka dib markii la helo lacag deebaaji ah. The jeer hogaanka u noqon wax ku ool ah marka (1) aannu ku helnay debaajigaaga, iyo (2) waxaan leenahay ogolaansho aad final tayada muunad & design.In farshaxanka dhammaan kiisaska waxaan isku dayi doonaa in ay u dhigma baahidaada. Xaaladaha intooda badan, innagu waxaynu nahay awoodaan in ay sidaas sameeyaan.
T / T. 30% deposit ka hor, 70% dheelitirka dhanka ah nuqul ka mid ah B / L.
hortiisa D / P (waraaqaha ka dhanka ah hortiisa bixinta).
O / A 60 maalmood (account furan) ee ugu wanaagsan ee macaamiisha ugu badan lagu kalsoonaan karo.
Waxaana hubaal ah in dhamaan qalabka loo isticmaalo bacyaal processing iyo baakadaha waxaa ka mid ah fasalka cuntada. Sida BSCI, Sedex diiwaan xubin, BRC, GMP, IS022000, HACCP warshad certified, waxa aan committedto qeybinayay alaabta oo tayo leh, ayaa dhanka kale wax ka qabashada iyo xalinta arrin kasta oo tayo leh la codsado.
Ma damaanad qaadi wasakhahaasi maal macaamiisha oo nabad iyo xasilooni '?
Haddii ay macaamiishu wax maal wasakhahaasi, waxaan ixtiraami doonaa oo ilaalin danahooda asaasiga ah iyo IPR (Intellectual Property Rights), wasakhahaasi ay gaar loo marnaba isticmaali doonaa meelo kale oo amar kale.
Waayo, muunad-gudbiya, ajuurada maraakiibta kala duwan yihiin $ 40 ilaa $ 80.
Waayo, naf dhibkeed LCL iyo FCL, ajuurada maraakiibta ku xiran INCOTERMS la doortay iyo forwarders.
Waxaan ka qeyb gali doona Canton ee Fair 122th